Semalt: Ndeipi Iyo Yakanakisisa Yokugadzirisa Mitauro Kuti Inyore Site?
Kugadzirwa kwewebhu, inozivikanwawo sekuwedzerwa kwedhesi uye kukohwa kwewebhu, inzira yekubvisa data kubva kune dzimwe nzvimbo. Web scraping software inosvika paIndaneti kana kuburikidza newebhu web browser kana neHypertext Transfer Protocol. Kushandura kweWebhu kunowanzoshandiswa kuburikidza ne bots automated bots kana web crawlers. Vanofamba nenzira dzakasiyana pamapeji ewebhu, kuunganidza deta uye kuitora sevashandisi 'zvavanoda - modelos profesionales fotos. Zviri mukati pewebhu yewebhu zvakadzingwa, kushandurwa uye kutsvakurudzwa, asi data yacho inonyorwa kune maspredishiti imwechete yakanyatsorongwa maererano nemirayiridzo.
Peji yewebhu yakagadzirwa nemitauro-based markup languages ​​yakadai se HTML, Python, uye XHTML. Iine upfumi hwekuziva uye yakagadzirirwa vanhu, kwete ye web scraping bots. Zvisinei, zvakasiyana-siyana kugadzira zvishandiso vanokwanisa kuverenga mapeji aya sevanhu uye kuwana ruzivo runobatsira mu CSV kana JSON mafomu.
Ko Python ndiyo yakanakisisa yekutsvaga mutauro webasa here?
Python inonyanya kurongedza mutauro unopa "shell" kuti iparadze data nenzira yebhuku rakajeka. Inobatsira vashandisi kubvisa ruzivo kubva pamapeji akasiyana ewebhu. Pikoni inobatsira apo vatengesi vedhijitori kana mapurogiramu vanosarudza kupora deta manyore. Ne rurimi urwu, tinogona nyore nyore kupinda mutsara wekhodi uye tione kuti data iri kudimburwa sei. Zvisinei, Python haisi iyo yakanakisisa yekutengesa mutauro mumutauro.
Python ine mazana emasarudzo ezvakagadzirirwa akagadzirirwa kuchengetedza nguva yedu. Semuenzaniso, iyo inonyanya kuzivikanwa pakati pevadzidzi vezvidzidzo uye zvekutsvaga deta. Pikoni inoita kuti zvive nyore kwatiri kutsvaga zvakakosha data uye mapepa akadzidzira paIndaneti. Asi kana zvasvika pakutsvaga kwewebhu, Python haisi yakakosha seC ++ uye PHP. Pikoni inonyanya kuzivikanwa nekuda kwayo yakagadzirwa-in uye inoponesa dhidhiyo mumafomu akafanana saJSON ne CSV.
Yakanakisisa purogiramu yemitauro yekutsvaga web:
Zvino yava pachena kuti Python haisi mutauro wakanakisisa wekutsvaga web. Panzvimbo pezvo, vakawanda vezvirongwa uye data masayendisiti vanosarudza C ++, Node. js, uye PHP pane Python.
Zvakanaka pakuchera nekukamba nzvimbo dzakasiyana. Node. js yakakodzera kune mawebsite ane simba uye zvinotsigirwa zvakashambadzirwa paIndaneti. Mutauro uyu unobatsira pakutsvaga data kubva zviviri kubva kune zvinyorwa zvinokosha uye zvakanyanyisa.
C ++ inobatsira zvikuru uye inobatsira. Mutauro uyu uri nani kwazvo kupfuura Python uye unoita kuti zviwanikwa zviwanike. Zvisinei, hazvikurudzirwi kune mabhizinesi pamusana pematare acho akaoma.
PHP ndiyo mutauro wakanakisisa wekutsvaga web. Kusiyana nePythoni uye C ++, PHP haina kuumba zvinetso panguva yekuronga mabasa uye kurasa zvinyorwa kubva kune mamwe mawebsite. Zvakafanana nezvose zvakapoteredza uye zvinoshandisa zvizhinji zvekutsvaga kwewebhu uye mapurojekiti ekudhonza kwedhadha paIndaneti. Tumira. io uye Kimono Labs ndiwo maviri ane simba data scraping tools yakabva pa PHP. Vane zvinhu zvakakura uye vanogona kuparadzira nhamba yakawanda yemapeji ewebhu mumaawa kana maviri. Zvinosuruvarisa, Mushonga Wakanaka uye Zvidzidzo (izvo zvinovakirwa paPython) hazvipi zvese zvinotsigira sezvinonzi PHP-based data zvidzidzo zvekushandisa.
Zvino zvakajeka kuti mimwe mitauro yemarongerwo emitauro ine zvingabatsire uye zvisingabatsiri. PHP, zvisinei, iri nani zvikuru kupfuura Python uye ndiyo yakanakisisa yekutengesa rurimi rurimi. Inopa zvivako zviri nani kune vashandisi uye inogona kutora mapurogiramu makuru-zhinji nyore nyore.